Global Voices teny Malagasy » Palestina: Ny andro nahalatsahan-drà be indrindra hatramin’ny 1967 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Desambra 2008 18:38 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika avylavitra
Sokajy: Israely, Maraoka, Palestina, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Vaovao Mafana, Vonjy Voina
Dia nanomboka toy ny andro “mahazatra” ihany ny tao Gaza. Fa tamin'ny folakandro, na izany aza, mazava be fa ny 27 Desambra dia ho tsarovana manokana ho ilay andro nahalatsahan-drà be indrindra tamin'ny fifandonan'i Palestina sy Israely hatramin'ny taona 1967. Na dia ny Hamas  aza no tena lasibatra nokendren'ny tafika israeliana tamin'ny fanafihana an'habakabaka nataony, rehefa nikisaka teny ny andro dia nazava fa nisy maro mihitsy ny olon-tsotra dangy izay mitontaly 225 na mihoatra an'izany.
Tohina mihitsy ny mpitoraka blaogy avy ao Palestina sy eran'izao tontolo izao amin'ny fiakaran'ny isa. Izay fahatohinana izay, miharo hatezerana vokatry ny fanjavozavoan'ny fandrakofan'ireo fampahalalam-baovao eran-tany ity tranga ity, dia azo tsapain-tànana mihitsy any anatin'ireo hafatra maro tanatin'ny blaogy hatramin'ny anio.
Marcy Newman ao amin'nybody on the line dia manome amin'ny antsipirihany ny tontolo androny tao amin'ny Faritra Andrefana , avoitrany ao ny fotoana nandrenesany ny vaovao:
Tamin'ny 11:30 antoandro raha nanomboka ny fanafihany an'i Gaza ny itf [tafika israeliana] tamin'ny fampiasana F16, fiaramanidina mpiady vitan'ny Amerikana. Tsy nandeha ny radio tao amin'ilay sampan-draharaha, toa tsy dia nahalàla na inona na inona loatra momba ity zavatra ity ny olona. Nefa tao anatin'ny 15 minitra monja dia efa ho 200 ny naratra naiditra tany amin'ny tobim-pitsaboana, toy ny tao amin'ny hopitalin'i Al Shifa. Navadika haingana ho fandraisana vonjy taitra ny sampana orthopedika sy ny efitra fampiterahana. Manomboka amin'ny zazakely 10 volana ka hatramin'ny anti-bavy 55 taona, sivily palestiniana no maty. Ity no andro tokana nahalatsahan-drà be indrindra hatramin'ny 1967.
Hoy izy mamintina:
Ity no andro nahalatsahan-drà be indrindra hatramin'ny 1967. tsy nahalàla ora intsony aho. Nandritry ny ora maro dia nilaozako nanaraka ny vaovao amin'ny teny arabo sy teny anglisy tao amin'ny Al Jazeera. Efa amin'ny 3:08 tolakandro izao, nandaroka baomba ny moske [toeram-pivavahana silamo] ny itf efa ho ora roa maninjihinjy, ery ampitan'ny arabe mankamin'ny toeram-pitsaboan'i Al Shefa. Heveriko ho tany amin'ny 1:10 tolakandro tany. tsy tadidiko tsara intsony izay niseho. Palestiniana 225 no maty. betsaka no mboala tototra any anaty korontana.
Haitham Sabbah, misora-tena ho “mpitoraka blaogy palestiniana toa valala voatango,” dia namoaka sary maro  nalainy androany tany Gaza. Toy izao no nanazavany azy ireny:
Ireo Palestiniana ao amin'ny Faritra Andrefana [bodoin'ny Israeliana] dia nandeha naneho fanoherana ny asa fampihorohoroana ataon'ny Israeliana any Gaza ary nanafika ireo Israelina mpampihorohoro tamin'ny tora-bato. Ny tati-baovao no nahalalàna fa na ny fitsitokotokoana nisy teo amin'ny antoko politika aza dia rava [nohadinoina] nandritra ireo hetsika fanehoan-kery ireo, izay nahitàna ny mpanohana ny Hamas sy ny Fatah nifanome tànana nanafika ny tafiky ny mpampihorohoro israeliana.
Ny mpitoraka blaoky Marokana Al Miraat (Ilay Fitaratra) dia niala ny toerana milamina nahazatra azy , ary manambàra fa:
Zavatra tsy mendrika loatra ho ana firenena lazaina fa mandroso ny mandaroka baomba ny faritra sivily. Nanomboka tamin'i Nuremberg dia noraisina ho toy ny heloka amin'ny ady izany. Heloka amin'ny ady izany, famonoana olona, fandripàhana faobe, natao tamina fitaovam-paidiana mahery vaika vita Amerikana, izay ny volan'ireo mpandoa hetra Amerikana no tena mamatsy azy.
Ny tena zava-doza dia ity, tsy hitondra fihatsaràna amin'ny resaka fandriam-pahalemana ao Israely akory izany ary vao mainka aza handrisika ny Palestiniana (àry ny làlam-be Arabo [tany Arabo angamba]) hifikitra amin'ny halako bika tsy tiako tarehy [na koa ny “rehefa izay dia izay”]. Ampolon-taona maro no nampihàrana izany pôlitika izany nefa tsy nitondra nankaiza [tsy nahitam-bokany]. Irsaely ihany no manohitra ny fampitsaharana.
KABOBfest's Mohammad, monina any Palestina, dia namintina ny zava-nitranga ny androtr'iny . Afa-niresaka tamin'ireo tapaka sy namana tao Gaza izy, ary nitatitra ny fihetseham-pon'izy ireny:
Sarotsarotra ihany ny fahazoam-baovao avy any Gaza nandritry iny andro iny, nefa mba afaka nifandray tamin'i Mohammad dadatoako ao an-tanànan'i Gaza ihany aho. Tena mbola tao anaty fisahotahana tokoa izy, tsy afaka niresaka firy. Nanontany azy izay toerana nisy azy aho; namaly izy fa tao akaikin'ny trano famoahana fahazoan-dàlana hivezivezy [pasipaoro] izy , ary tsinjony fa nisy faty manodidina ny dimampolo teo ho eo tao anatiny. Tsy nahateny na inona na inona aho, notapahako ny fifandraisana.
I Jasim dadatoako ao Khan Younis koa dia tany ivelan'ny trano. Tsy naninona, hono izy, nefa nisy kosa fipoahana mahery vaika sy fatin'olona eran'ny tanàna.
Tsy nisahirana niantso ilay dadatoako Mahmoud intsony aho; efa niantso azy rahateo ny reniko ary naheno kiakiaka [tomany] nanodidina azy. Nitomany ny fahafatesan'ny anadahiny ny vadiny.
Heveriko fa ny fahatsapana tena goavana indrindra teto dia ny dona, na tao Gaza izany na tany amin'ny Faritra Andrefana. Amin'ny maha-voalohany anay tamin'izay nizàka izany , dia efa zatra izahay mahita an'i Israely mandingana ny faritra mena, amin'ny famoretana sy ny fibodoana izay tohizany hatrany. Fa zavatra hafa ny amin'ity. Tsy hita pesipesenina [tsy takatry ny saina] ny halehiben'ny vono olona nisy.
Tohizany ny famintinany:
Mihevitra mantsy i Israely fa ho azony apetraka amin'ny fampiasana hery izay sitraky ny fony. Ny làlan-tokana kendreny hahatongavana amin'izay tanjony izay dia ny fanaovana vono moka. Nefa misy fomba fijery iray hafa koa, dia ny fifidianana hatrehin'ny vahoaka israeliana atsy ho atsy. Tsy zava-baovao mihitsy ny mahita ny governemanta israeliana eo an-toerana manao habibiana amin'ny Palestiniana mba hakàna ny fo sy ny fanohànan'ny vahoaka, indrindra fa mikendry ny handrombaka ny fifidianana ho avy eo ny Likud. Endrika fanehoan-kery ataon'ny antoko halam-bahoaka eo amin'ny fitondrana dia ny Kadima izany.
Androany, ary koa angamba amin'ny andro rehetra mbola ho avy eo, dia hazava fa fanehoana ny toetra ratsy miafina ananan'i Israely, izay azo faritana tsotra ho fifangaroana mampidi-doza misy amin'ny “fantasme” sionista sy ny tazom-pifidianana. Nandritry ny 60 taona, dia niezaka hatrany Israely hampiasa ny tanjaka ara-tafika ananany mba hanerena ny Palestiniana hanaiky ny làlana nosoritany ho azy ireo, ary nandritry ny 60 taona dia tsy nisy governemanta israeliana nahatontosa izany.
Mba tsarovy i Gaza.
Mbola betsaka momba ny fanafihana an'i Gaza, tsidiho Global Voices Takelaka manokana momba ireo zera baomba .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/29/1462/
 dia manome amin'ny antsipirihany ny tontolo androny tao amin'ny Faritra Andrefana: http://bodyontheline.wordpress.com/2008/12/28/the-single-bloodiest-day-since-1967/
 dia namoaka sary maro: http://palestinethinktank.com/2008/12/27/haitham-sabbah-photos-of-the-day/
 dia niala ny toerana milamina nahazatra azy: http://almiraatblog.wordpress.com/2008/12/28/brinkmanshi/
 namintina ny zava-nitranga ny androtr'iny: http://www.kabobfest.com/2008/12/gaza-slaughter-of-people.html
 Takelaka manokana momba ireo zera baomba: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2008-gaza-strip-bombings/